MAKING ORPHANS HAPPY 2015 – HARO
MAKING ORPHANS HAPPY 2015
Published by harousa at March 4, 2017
Hay’adda HARO Puntland ayaa maalinkii koowaad ee Ciiddul Fidriga oo ku beeganayd Jimcihii dharka Ciidda u qaybisay caruur gaaraya labo boqol oo ilmood oo isugu jiray wiilal iyo gabadho agoomo ah, waxaana ilmo kasta la siiyay lacag dhan 30 dollar si loo ciidsiiyo.
Munaasabad aad u balaaran oo ay ka soo qayb-galeen madaxda hay’adda HARO iyo qaar kamid ah culumaa’udiinka Puntland ayaa lagu qabtay masjidka Al-Huda ee magaalada Garowe ,halkaasi oo lagu soo bandhigay deeqdan.
Caruurtan agoonta ah oo siyaabo kala duwan lagu soo xulay ayaa mid kasta waxaa gacanta laga saaray lacag shilin Soomaali ah oo dhan 30-dollar, waxaana lacagta iska soo aruuriyay Soomaali muxsiniin ah oo dunida daafaheeda kala jooga.
“Waxaan alle ka dib halkan uga mahad-celinaya walaalaha Soomaaliyeed ee deeqdan u soo dhiibay caruurtan agoonta ah ee kaalmada u baahan “ ayuu yiri wakiilka hay’adda HARO ee Puntland Sheekh Yaasiin Cabdulaahi Cali oo la hadlay warbaahinta.
“Dadka hantida haysta waxaa looga baahan-yahay in ay garab-istaagaan cid kasta oo Soomaali ah oo u baahan mucaawinaad iyo taageero “ ayuu mar kale yiri Sheekh Yaasin oo tilmaamay in caruurtan ay si fiican uga qayb-galeen maalmihii ciidda.
Ugu dambeyn, Gudaha Soomaaliya waxaa ku nool caruur badan oo agoomo ah, kuwaasi oo siyaabo kala duwan ku waayay waalidkood, waxaana arintan loo sababaynayaa colaadaha wali ka jira qaybo kamid ah Soomaliya.